जेठको पहिलो साता देउवा प्रधानमन्त्री ! बजेट नयाँ सरकारले ल्याउने | Radio Makalu 102.1 MHz Websoft University
जेठको पहिलो साता देउवा प्रधानमन्त्री ! बजेट नयाँ सरकारले ल्याउने
दोस्रो चरणको चुनाव गराउने जिम्मा देउवालाई
काठमाडौं, वैशाख १० गते । स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने सहमतिसँगै नयाँ बजेट कुन सरकारले ल्याउने भन्ने प्रश्न उठेको छ । यसको जवाफ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई कहिले सत्ता हस्तान्तरण गर्छन् भन्नेसँग जोडिएको छ ।
सरकार र मधेसी मोर्चाबीच शनिबार स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने सहमति भएको थियो । दोस्रो चरणको निर्वाचन जेठ ३१ मा गर्ने लगभग सहमति भएको छ ।
स्रोतहरुका अनुसार यो सहमतिका क्रममा बजेट र सत्ता हस्तान्तरणबारे पनि समझदारी भएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जेठ १ गते नै सरकार छाड्न सहमत भएका छन् । यो सहमति अनुसार जेठको पहिलो साता नै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नेछन् ।
र, बजेट पनि नयाँ सरकारले ल्याउनेछ । दुई चरणमा चुनाव हुने भएपछि बजेट कसले ल्याउँछ भन्ने प्रश्नमा बालुवाटार बैठकमा सहभागी कांग्रेसका नेताले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘बजेट देउवा सरकारले ल्याउँछ । त्यसरी नै सत्ता हस्तान्तरण हुन्छ ।’
कांग्रेस र माओवादीको गठवन्धन सरकार बनाउने बेलामा नै ९-९ महिना प्रचण्ड र देउवा प्रधानमन्त्री हुने लिखित सहमति भएको थियो । यो सहमति अनुसार प्रचण्डले बैशाखको सुरुमा नै नै देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु पर्ने हो । तर, स्थानीय चुनाव बैशाख ३१ मा गर्ने भएपछि कांग्रेस एक महिना पर्खन सहमत भएको थियो ।
कांग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा देउवाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसामू पटकपटक जेठ १ मा आफूलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु पर्ने बताउँदै आएका थिए । यसो भन्नुको कारण बजेट नै हो । जेठ १५ मा बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था नै छ ।
माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसालले सहमति अनुसार नै सत्ता हस्तान्तरण हुने अनलाइनखबरलाई बताइन् । उनले भनिन्, यदि नयाँ सहमति भएन भने हामी सहमति पालना गर्छौं र राजनीतिक संस्कार देखाउँछौं ।-’अनलाइनखबर